Iran: Mahatsiaro An’i Omid Reza Mir Sayafi sy ny 18 Martsa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2017 1:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, English
Volana vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'ilay bilaogera sady mpanao gazety Omid Reza Mir Sayafi, izay maty tao amin'ny fonja Iraniana taorian'izy voalaza fa nanala baraka mpitondra fivavahana, napetraka ny tranonkala fahatsiarovana sy fikatrohana March18.org ho fahatsiarovana azy sy hihazonana ity tantara ity tsy hiverina intsony. Ity manaraka ity ny lahatsary voalohany noforonina ho an'ny hetsika March18 (OR318), miaraka amin'ny teny filamatra hoe: Aoka ilay bilaogera voalohany maty tany am-ponja no ho farany.
Noho ireo zava-nitranga vao haingana tamin'ny korontana ara-politika ao Iran, taorian'ny fifidianana farany, zava-dehibe tsy mbola nisy toy izany ity hafatra ity. Tsy manao tsirambina ny zava-misy fa tamin'ny alalan'ireo mpiserasera media sosialy sy bilaogera no nampitaina tany amin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ny vaovao mitranga ao Iran, rariny tokoa raha arovana amin'ny fampidirana am-ponja, fanjavonana sy izay mety ho fahafatesana izy ireo. Hamid Tehrani avy ato amin'ny Global Voices rnampahafantatra antsika tamin'ny herinandro lasa mikasika ny tranga vaovao amin'ny fisamborana bilaogera Iraniana.
Avy amin'ny tranonkala March18.org :